Richard Stallman: zvimwe panyaya yekurega basa | Linux Vakapindwa muropa
Huye, nhau nezve Kusiya basa kwaRichard Stallman kubva pachinzvimbo chake kuMIT neFSF Ndinofunga zvakatora munhu wese nekushamisika. Kunyange Ini ndanga ndisingazive nezvenyaya yaEpstein, nekuti ini handiwanzo tevera TV kana imwe midhiya zvakanyanya. Ini ndanga ndisingazive zvachose zvakaitika uye ndaida kugadzira chinyorwa ndichizivisa nhau asi ndisina kunyorova sezvo ini ndaive ndisina data rakaringana rekutaura. Asi ikozvino, zvimwe zvirevo (izvo zvandinoonga) neruzivo rwandakagona kuunganidza pane nyaya rwakandipa maonero ari nani enyaya.
Izvo zvakaitika iwe unotoziva, asi ikozvino tichaenda iyo yekuwedzera ruzivo izvo zvandaisaziva, asi izvo zvandinofunga zvakakosha semubatsiri kune yangu imwe chinyorwa kuti unzwisise zvese zvirinani. Pano zvakare Ini ndinosiya chinongedzo chechinyorwa chakakumbira kusiya basa yaRichard Stallman yemhosva yake yeemail iyo yakanga yaburitswa pamusoro peafungidziro yekuti iye maRM aive nenyaya iyi. Saka iwe unogona kuona iyo yekutanga sosi yeruzivo iyo yakakonzera zvese izvi ...
Zvichida, musikana wacho akatora maemail emukati kubva kuMIT umo Richard Stallman akapa maonero ake. Anoti Epstein akamukumbira wakarara pabonde neMIT nhengo yakashaya muna 2016 (Marvin Minsky). Uye Stallman aiuya achidzivirira Minsky nekutaura kuti waaishanda naye haana kumbobvira arara nemusikana achiziva kuti akamanikidzwa. Mufakazi aive panzvimbo iyi anovimbisa kuti musikana uya akasvika, asi Marvin akamuramba.
Zvakare ujekese kuti Jeffrey Epstein akaedzwa, akabatwa nemhosva yekubata vana zvisiri pamutemo, uye airatidzwa seanobata chibharo. Mujeri maaive, akaedza kakawanda kuzviuraya. Uye zvinoita sekunge akazowana. Musi waAugust 10, 2019, mutumbi wake wakawanikwa muchitokisi uye zvese zvakanongedzera kuzviuraya, kunyangwe mamwe marongero akataura kune zvimwe zvikonzero ...
Ichokwadi icho zvimwe zvirevo zvakaitwa naStallman zvakaburitswa muchimiro zvinonzwa zvakashata kana kuturikirwa zvisizvo. Uye izvi zvinogona kunge zviri izvo. Ichokwadi zvakare kuti munhoroondo yese Stallman akaita zvirevo maererano nezvebonde vaenda kuchinja nemaonero ake ekuona zvinhu uye kuziva paakakanganisa. Muchidimbu, mumashoko aya anoti:
Munhu akagadzirira kuita bonde paanongosvika pakuzara pabonde (kuyaruka). Uye kuti hapana chakaipa pamunhu wezera rekuita bonde uye mudiki achirara nemvumo yake nemunhu mukuru. [Ichokwadi, izvi zvinoitika kazhinji munzanga]
Mushure mekukurukurirana akaziva kuti hazvisi zvemuviri chete, asi kune zvakare chikamu chepfungwa. Naizvozvo, funga kuti mudiki (kunyangwe mukukura kwake pabonde) anorara nemunhu mukuru nekuti zvinogona kukonzera kukuvara kwepfungwa kune mudiki. [Haasi kutsigira kubatwa chibharo, kana zvekubata chibharo, kana zvimwe zvakadaro]
Gare gare, anoenderera mberi obva aona kuti hazvina kunaka kuti mwana ararame nemunhu mukuru chero zvodini. Kunyangwe nemvumo yako.
1 Kiyi iripi?
Izvozvo zvakati, Ini ndinodzokera kunyaya huru uye kusiya basa yenzvimbo nematambudziko iwayo. Zvikurukuru kune maemail akabatwa ayo anga achishandiswa kupokana naye pakutaura nezvenyaya yaEpstein nevamwe. Izvo zvakataurwa mune iwo maemail nezve nyaya yandakambotaura Minsky yaive:
«[…] Izwi rekuti 'kushungurudzwa pabonde' harina kujeka uye rinotsvedza […] akazviratidza kuna Minsky akagadzirira zvakakwana.»Kupindura tambo yeemail kubva kuMIT kune vamwe vadzidzi vakabvunza pasocial network kuratidzira kuratidzira zvakaitika. Asi kana chiri chokwadi kuti paive nechapupu chakazviona zvese uye zvakaitika sezvizvi, Stallman anogona kunge ari pachokwadi.
Zvese zve iyo nyaya inosanganisira mushakabvu Marvin Minsky akapomerwa mhosva yekubata chibharo mumwe weavo vakabatwa naEpstein. Uye mazwi "kushungurudzwa pabonde" akasimba kwazvo kuna Stallman, nekuti zvinoita sekunge munhu akabatwa akamanikidzwa kuzviita naEpstein iye kwete naMinsky. Zvichida chinobhadhariswa pano chingave chekufunga kuti munhu akamanikidzwa anozviona sekuti "akagadzirira chose" kuita chimwe chinhu, nekuti zvinogona kuita sekunge zvaive mukutenda kwake uye hazvisi izvo. Ini pachangu ndinofunga kuti zvese zviripo kiyi yekusanzwisisa.
Izvo zvakatongwa naStallman raive izwi iro pacharo, kwete chokwadi. Chero ani anoziva nyaya yaRichard uye zvaari iye pachezvake anogona kunzwisisa nzira dzake. Zvinonzi ane Asperger Syndrome, uye ini handisi kuzviita sechikonzero. Asi pachezvangu ndine hunhu pane iyo autism spectrum uye zviri kubhururuka dzimwe nguva kuti unzwisise zvimwe zvinhu zvinonzwisiswa nevamwe zviri nyore.
Chero zvazvingaitika, Stallman iye zvino ave mushe uye achiita misoro yezvinyorwa zvishoma. Ndinoda kujekesa zvakare. In hapana mhosva yaakapara mhosva (Akangopa maonero ake), ndakazvitaura muchinyorwa chekutanga uye ndinozvitaura zvakare pano ... Ndosaka aona kuti mhirizhonga iyi yakonzerwa na «nhevedzano yekusanzwisisana uye kusanzwisisika".
Ini handisi kuzvitaura nekuda kwenyaya iyi, kana kune chero imwe kunyanya. Ini ndinozvitora semukadzi, asi ndapota, vamwe vakadzi vanozvidaidza kuti vakadzi uye ivo vari kunyatso kuita kukuvadza kwakawanda kuchikadzi chaicho. Chechikadzi chaicho ndechimwe chinoda kuenzana kwevakadzi, kwete kupihwa simba kwevakadzi pamusoro pevarume. Zvingadaro "Hembrismo" kana "misandría" uye haifanire kuvhiringidzika sechikadzi, nekuti hachisi icho. Uye ndapota, usashandise izwi feminazi futi.
Nezve nyaya yebonde, ndinoda kujekesa kuti ini ndinofunga kubata chibharo seimwe yemhosva dzakaipisisa izvo zvinogona kuitwa, pamwe nekuuraya. Asi pane chimwe chinhu chinosemesa kuti mumwe munhu akazviita haatongwe ndokubhadhara icho, uye ndiko kuti mumwe munhu asina kuzviita uye asina mhosva anobatwa nazvo ... ndinodzokorora, handisi kutaura kune imwe nyaya, asi Zvinoratidzika zvakakomba kwandiri.
Mamwe data uye ruzivo pane iyi nyaya, kuitira kuti ugone kutora yako mhedziso (Iri muChirungu, asi zvakakosha kuverenga, kunyangwe ikadudzirwa kana iwe usingazive Chirungu, nekuti ine ruzivo runonakidza kwazvo, kunyanya chinyorwa chechipiri):
Pahutungamiriri hwaRichard Stallman weFSF.
Kureurura kwepurogiramu uyo ​​akashanda kwenguva yakareba naRichard Stallman.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Richard Stallman: zvimwe panyaya yekusiya basa
Ini ndinobvumirana zvizere, ndinoziva Richard uye pamusoro pemakore aratidza kuva munhu akavimbika uyo akapa ruzivo rwake kuruzhinji mukubatana uye akatidzidzisa kuona nyika neimwe nzira, mumwe munhu nezuro akati rinofanira kunge riri zuva kuchema Zuva rakasiya Stallman kuFSF uye ini ndoziva neicho chirevo, zvinokodzera ruremekedzo rwedu nekutenda.
Ini ndinofunga kuti zvirokwazvo mazwi aStallman anowanzo kuve anodudzirwa zvisirizvo neruzhinji sezvo ivo vasingatore nguva yekuziva nzira yake, uye kunyangwe yaingova fungidziro yaive kure nekushandisa mhosva iyi, zvinoita kwandiri kunge chinhu chinotyisa kuti a «Heroine Feminazi» inoshora uye inongobura chepfu yefashoni yakapusa uye mukutsvaga mukurumbira kubvira nekuremekedza kwese uko kwakakodzera vakadzi, asi havafungi nezve ... «Uye kana panzvimbo pemurume anga ari mukadzi angadai akati mazwi mamwe chete iwayo? " Ini handifunge kuti vaigadzira zvese zvinonyadzisa vasati vatsvaga nzira dzekudzivirira nekuzvipembedza. Muzvokwadi pane yakawanda sekasi, theatre uye unyengeri hwekusanzwisisana kuri nyore. Uye zvakaipisisa ... Kana vanhu vachinzwa nziyo dzakadai vanoita senzara yemapere vasina kana kumbotarisa kuti ndiani Richard Stallman uye zvaari chaizvo
+10 Zvikuru mukubvumirana nekomendi yako, inoyamwa yetsika zvekuti inongotarisa kuziviswa.
Uye zvese zviri munharaunda zvinorumbidza rusununguko rwemaonero, zvinotumira mazai xD!. Zvinoita kunge zvisina musoro kuti anomanikidzwa kusiya basa nekuda kweizvi, kana ndine shamwari yangu yandinovimba nayo kuti ishandure mafungiro angu nezvake, vanotanga vandiratidza zvimwe. Kana iwe zvakare uine chimwe chinhu cheasperger, ini ndinonzwisisa kuti zvinoda iwe kuti uzvibate nemasekondi, chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri, usauye kwandiri nezvinhu zvakafanirwa zvinofamba mukati mechinhu chemvura, taura hove uye ngatimise iyo bulshit.
Nenzira iyo moderator, iro bhokisi rekutarisa "Ini ndinobvuma zvakavanzika mazwi" idiki kwazvo zvekuti dzimwe nguva inopfuura nenguva. Iyo ichave iri nyaya yekusavapo-kufunga-kwavo, asi diki rakakura raizofambisa maitiro evanhu vasina ruzivo seni.
Ini pachangu ndinofunga pane chaiko katsi yakavharirwa mune izvi zvese! Ini ndinofunga izvo zvaitsvagwa neese sekasi iyi kwaive kupatsanura RMS neFSF !! Gross kufamba kwevematongerwo enyika nekutengeserana!
Kuona zviri kutaurwa nezvenyaya iyi, paive nevazhinji vaida kudzinga Stallman nekuti havatenderane zvakanyanya mumaonero ake ekuti angadzivirire sei Mahara Software.
Iyi gaffe mune yekutaura yaive nguva yakakodzera yekusvetuka pairi.
Zvisinei, zvinokosheswa chinzvimbo chake chekusiya uye kupatsanura munhu kubva kuchirongwa chaanga achidzivirira hupenyu hwake hwese.
Kupesana nesfconservancy, tinokumbira Stallman kuti agare pazvinzvimbo zvake mubato repachena rema software.
Richard Stallman akatsigira uye akasarudzika software yemahara kwemakumi emakore nekuomerera kwakasimba uye kwakasimba kune software yemahara, pasina madhiri kana nuances, kodhi muimbi, FOSSista kana zvakadaro vanhu vazhinji nemapoka mune yemahara software nharaunda vanowira mukati, uye izvi (uye kwete zvimwe zvinhu) ndizvo zvinofanirwa kuongororwa kutonga kuti munhu anoita zvakanaka here basa ravo rekutungamira pfungwa kana kufamba. Tinogona kana kusabvumirana nezvako zvirevo pamusoro penyaya dzisiri dzemahara software, asi takagara tichikuona uchijekesa paunotaura nezvemahara software semunhu anotaurisa nezvenyaya iyi, uye kana uchitaura semunhuwo zvake anonzi Richard pamisoro iyo isiri yemahara software, uchidzivirira kusanganisa yako wega nehunyanzvi.
Pamusoro pezvo, kubvuma kusiya basa kwavo zvinoreva kubvumirana nevaya vanotenda mu "vanhu vakakwana" uye vanonamata vanhu vavanozovenga kana vakaita zvakaipa, hunyengeri hwevanhu (vakanaka nevakaipa) vanopa hurukuro dzisina kunaka dzemapoka takatarisana, kunobva mhirizhonga nehondo. Tichifunga nezvezvinoitika zvinosuwisa maitiro ekutonga basa remunhu pane imwe nyaya, nezvavanotaura pachavo pane dzimwe nyaya, izvi zvinogadza zvakaipa. Sezvo pasina vanhu vakakwana, saka hapana anogona kuve munhu anongedzera pane chero chidzidzo. Isu tinoshoropodza pachena iro risingafadzi iro iro Software Freedom Conservancy rakaita mune izvi.
Isu tiri pachena kuti yakawanda yemakakatanwa yakasimudzirwa neavo vanoshuvira kuve vanhu / masangano ereferenzi munyika yepachena software vachitsvaga kuunza kusanzwisisika kweyakavhurika sosi mumunda, chimwe chinhu chavanogona chete kuzadzisa kana vakashoresa uye bvisa kubva pachiitiko kune avo vakatsigira zvakasununguka software yemakumi emakore uye nekutenda kuna isu takawana zvakanyanya munguva ino.
Isuwo tinoshoropodza basa rakaitwa neFree Software Foundation, timu yayo yeku manejimendi haina kuzadzikisa kusiya basa kwemunhu akaita sarudzo isina kukodzera nekuda kwekutambudzwa zvisina kukodzera (havana kana kuburitsa chirevo cheveruzhinji chinoratidza kudemba kwavo kana kusagadzikana pamusoro nezve musoro wenyaya). Zvakare, iyo Free Software Foundation haina kutyora asi inochengetedza hukama neiyo Software Freedom Conservancy iyo yakasimudzira kutambudzwa kwaRichard Stallman, kunyangwe iye Executive Director anochengetedza rutsigiro rwake kuruzhinji rweSoftware Freedom Conservancy. Yakadai Yemahara Software Foundation haina kukodzera rutsigiro rwedu. Nezve izvi, iyo Mahara Software Foundation haina chete kurasikirwa uyo aive purezidhendi wayo, varasikirwa nevanhu vese vanotsigira Richard Stallman. Kana iyo Free Software Foundation ikaonekana nemutungamiri wayo nenzira iyi, isu tinoti kune Free Software Foundation. Tichaenderera mberi nebasa redu rekusimudzira uye nekuparadzira mahara software, asi isu hatizozviita pasi pechirevo cheavo vakazviisa muchimiro apo izvi zvaiitika kumunhu akaita zvakawanda nekuda kwechikonzero saRichard Stallman.
Tinodaidza (kutsvaga kuronga) vanhu vese vanodzivirira yemahara software sezvazviri, pasina kujeka kana kutsvedza nemasiraidhi, saRichard Stallman akadzivirira kwemakumi emakore, vanhu vakura zvakakwana kuti vanzwisise uye vadzivirire kuti hakuna vanhu vakanaka kana vakakwana. , kuti nemunhu wega wega iwe unogovana zvimwe zvinhu uye kupokana pane vamwe, uye kuti vanhu vanomiririra nyaya vanofanirwa kutongwa nekugadzirisa kwavo kana kwete kuchikonzero chavanomirira vachitamba chinzvimbo chevamiriri.